Juggernaut, Sphinx နှင့် Status - စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | applications များ, အကြံပြုပါသည်
၏လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application အတွက်လက်ရှိနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အခြားနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ခေတ်မှီသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆက်ပြောသည် WhatsApp ကိုဒီနေ့စိတ်ဝင်စားစရာ ၃ ခုတင်ပြမယ် open source လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များ.
သူတို့က Juggernaut, Sphinx နှင့်အဆင့်အတန်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဆိုင်ရာ application များကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းကျိုးများသာမက၊ ငွေပေးချေမှု၏နည်းလမ်းများသူတို့အပေါ်အခြေခံပြီးကတည်းက blockchain နည်းပညာ.
GNU / Linux အတွက်အုပ်စုလိုက်ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ
တင်ပြရန်ဤအသစ်သုံးခုအက်ပလီကေးရှင်းများမှဖြစ်သော်လည်း open source ဖြစ်ပြီး, စိတ်ဝင်စားစရာအရာသည်အောက်မှာ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ် Blockchain နည်းပညာ။ သို့သော်၊ ဤနည်းပညာမပါ ၀ င်သောအခြားနည်းလမ်းများရှာဖွေလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ဖတ်ရန်အကြံပြုထားသောယခင်စာပေများစွာရှိသည်။
"ဆက်သွယ်ရေး application များသို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းများသည်လူတစ် ဦး ချင်းသို့ (သို့) အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဆက်သွယ်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုထိရောက်သောနှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အလွန်အသုံးဝင်သည်။" ဆက်သွယ်ရေး - GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းများ.
ဆက်သွယ်ရေး - GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းများ
Telegram or WhatsApp: TG ကို Linux သုံးစွဲသူများအတွက်ဘာကြောင့်ပိုနှစ်သက်သလဲ။
1 Blockchain နည်းပညာဖြင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များ
1.1 Juggernaut ဆိုတာဘာလဲ
1.2 Sphinx ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 Status ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ Juggernaut တရားဝင် site ကို၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"ထိရောက်သောစာတိုပေးပို့စနစ်ယန္တရားနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးစဉ်၊ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော onion ကွန်ယက်မှဖြတ်သန်းသွားသော end-to-end စာဝှက်စနစ်ယန္တရားကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့စာများပေးပို့ပုံကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုသည့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application သည် သက်တူရွယ်တူချင်းမှ peer ရန်။ ထို့ကြောင့် Juggernaut သည် Bitcoin နှင့် Lightning Network မှပေးသောစွမ်းရည်အားလုံးကိုခံစားခွင့်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။"
ချမ်းသာ multiplatform လျှောက်လွှာ လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Windows, Mac OS နှင့် Linux။ ထိုအခါ installer ဖိုင်ပုံစံကိုလာပါတယ် ".AppImage" format။ ထို့အပြင်၎င်း၏ developer များက၎င်းကိုမကြာမီမိုဘိုင်း operating system platform များအတွက်ရရှိနိုင်တော့မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
အဆိုပါအညီ Sphinx တရားဝင် site ကို၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
“ Lightning Network ရဲ့ထိပ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီး TLV ကိုသုံးပြီးချက်ချင်းသတင်းပို့နိုင်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။ ဆိုလိုသည်မှာမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ပေးပို့သောငွေပေးချေမှုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီသည် ၄ ​​င်းတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလမ်းကြောင်းများသေချာစေရန် micropayment တစ်ခုလိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ တရားဝင်ဆာဗာများကိုအသုံးပြုပါက Satoshis သည်၎င်း၏ node များကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် node များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ငွေပေးချေမှုအားမပေးပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာအနက်လျှောက်လွှာသည်ငွေပေးချေမှုကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်တောင်းခံခြင်းကိုနှစ်ဖက်သဘောတူခြင်းနှင့်အုပ်စုများဖန်တီးခြင်းတို့အားထောက်ပံ့သည်။"
ချမ်းသာ multiplatform လျှောက်လွှာ လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Windows, Mac OS နှင့် Linux။ ထိုအခါ installer ဖိုင်ပုံစံကိုလာပါတယ် ".AppImage" format။ ထို့အပြင်၎င်းကိုမိုဘိုင်း operating system platform များဖြစ်သော iOS နှင့် Android အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ တဖန်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့သင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
အဆိုပါအညီ status တရားဝင် site ကို၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
“ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်း၊ crypto ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Web3 browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်လုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေးအတွက်အစွမ်းထက်သော super application တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်နှင့်သင်၏တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်စာဝှက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့စာတွေကိုလျှို့ဝှက်ပြီးသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလုံခြုံအောင်လူလတ်တန်းစားတွေကိုလျှော့ချပစ်လိုက်တယ်။"
ချမ်းသာ multiplatform လျှောက်လွှာ လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Windows, Mac OS နှင့် Linux။ ထိုအခါ installer ဖိုင်ပုံစံကိုလာပါတယ် ".AppImage" format။ ထို့အပြင်၎င်းကိုမိုဘိုင်း operating system platform များဖြစ်သော iOS နှင့် Android အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အချက်အလက်တွေအတွက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Juggernaut, Sphinx y Status»,3စိတ်ဝင်စားဖို့ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များ အပေါ်အခြေခံပြီးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် blockchain နည်းပညာ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Juggernaut, Sphinx နှင့် Status: စိတ်ဝင်စားဖွယ်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များ